“Ruqo Ninkii Lahaa Dabada Hayaa Ma Kacdo.” Hoggaamiye Xirsi Cali Xaaji Xasan Oo Farta Ku Fiiqay Cidda Dabada Haysa Qabsoomida Doorashooyinka.
Hargeysa(Gebogebonews)-Hoggaamiyaha xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa waxa uu si faah-faahsan uga hadlay cidda mas’uul ka ah muddo dhaafka doorashooyinka, waxaanu taxay caqabadaha ugu waaweyn ee ku gadaaman in doorashooyin ay dalka ka qabsoomaan iyo sida looga gudbi karo.
Haddaba waxaan leeyahay weli xal waa la gaadhi karaa, inaga oo ka shidaal qaadanayna xikmadii ahayd “If there is will there is a way” oo macnaheedu tahay, “Hadii doonisi jirto, dariiq waa la helaa”. Xalka waxaan u arkaa in lagu heshiin karo in meel dhexe la isugu yimaado. Gurmadkaa waxaa geli kara sadex qolo midkood haddii ay is kaashadaana waa ka sii wanaagsantahay waxaanay yihiin: –